Taariikh Madow | allsanaag
Xaaska Dalxa oo la siiyey Kursigii gobolka Sanaag.
Xildhibaankii aqalka sare ee gobolka Sanaag, ayaa la siiyey Nuuro Faarax Jaamac oo ka soo jeeda beesha Habar yoonis ee Isaaq, ahna xaaska Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, waxaana u fududeeyey in kursiga aqalka sare ee gobolka Sanaag sidan lagu qaato Caasho Axmed Cabdale oo u caraysan beesha Warsangeli ka dib marki ay ka mid noqon wayday Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Intii doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya la qabanayey, ayaa maanta markii ugu horaysay waxa la wada tartansiiyey musharaxiin ka soo wada jeeda labada beelood ee Daarood iyo Isaaq
Gudiga loo saaray in musharaxiintan ay kala saaraan ayaa waxay ka koobnaayeen 7. Shan ka mid ah waxay ka soo jeedeen beesha Isaaq, Labada kalena waxay ka soo jeedeen beesha Gudabiirsay. Marka laysku darona guddigan todobada ahi waxay ka soo wada jeedeen beesha Dirta waqooyi
Sidoo kale dadkii codaynayey maanta ayaa ka koobnaa 43 xubnood oo ka soo wada jeeday Dirta waqooyi . 38 xubnood waxay u codeeyeen Xaaska Xildhibaan Dalxe. Caasha Cabdale waa ogeed in haddi ayna ka qayb gelin doorashadII maanta la qabtay in xitaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu shaki ku jiray inay qabsoonto. Hase ahaatee waa ka qayb gashay, Hal codna ma helin. Waana sidii ay doonayeen Jaamac Yare iyo kooxdiisu.
Jaamac Yare, oo ah nin ku caan baxay baxay nacaybka beesha Warsangeli, hase ahaatee ay dhaleen oo Guddigan todobada madax u ah ayaa si kursigan u siiyo beesha Garxejis wuxuu adeegsaday Caasha Axmed Cabdale.
Ma jirin siyaasi kale oo ka soo jeeday beesha Warsangeli oo doonayey in kursiga Aqalka Sanaag ee gobolka Sanaag uu kula tartamo Qori jarato iyo cid kale toona.
Ugu danbayntii Kursigan aqalka sare ee GOBOLKA SANAAG in beesha Warsangeli in ayna helin waxa laga soo go’aamiyey guriga Ismaaciil xaaji Nuur ee magaalada Ceerigaabo , waxaana maalgeliyey maamulka SNM, waxaana loo adeegsaday Caasho Cabdale inay fuliso.
WARKAN OO FAAHFAAHSAN GADAAL AYAAN IDIIN KA SOO QORAYNA
← Nashqadaynta Magaalada Boosaaso. Aqalka Sare Iyo Cadaalad Darada Dhacday →